हेमलाल र कान्छिमायाले जिते १२ औं काठमाण्डौ म्याराथन | suryakhabar.com
विश्वभर कोरोनाः ७१ लाख ८९ हजार वढी संक्रमीत, ४ लाख ८ हजार बढीको निधन (पछिल्लो अपडेट)
कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाको शवः ढुङ्गामुढा गर्ने १८ जनालाई नियन्त्रणमा
अबिलम्ब बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउन आवश्यकः नेता जोशी (सभापतिलाई २१ बुंदे चिठीसहित)
Home खेलकुद हेमलाल र कान्छिमायाले जिते १२ औं काठमाण्डौ म्याराथन
on: २० आश्विन २०७५, शनिबार १४:१३ In: खेलकुदTags: No Comments
काठमाडौं । नेपाली सेनाका हेमलाल श्रेष्ठ र भक्तपुरकी कान्छिमाया कोजुले १२ औं काठमाण्डौ म्याराथनमा जित आत्मसाथ गर्न सफल भएका छन् ।
हेमलालले ४२.१९ कि. मि.को दूरी २ घन्टा, २० मिनट ४५ सेकेन्डमा पुरा गर्दै स्वर्ण हात पारे । दोश्रो स्थानमा सेनाका राजन खत्री र तेश्रो स्थानमा नेपाल प्रहरीका भूमिराज राई रहे । खत्रीले २ घन्टा, २३ मिनट ३३ सेकेन्डमा र राईले २ घन्टा २४ मिनट ३१ सेकेन्डमा पुरा गरे ।
कान्छिले उक्त दूरी २ घन्टा, ५० मिनट ४१ सेकेन्डमा पुरा गरिन् । भक्तपुरकै सरिता वासीले ३ घन्टा ११ मिनट १४ सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्दै रजत र राजपुरा पछाईले ३ घन्टा, २४ मिनट ८ सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्दै कास्य पाइन् ।
विजयी खेलाडीहरुले क्रमशः पहिलोले ५० हजार, दोश्रोले २० हजार र तेश्रोले १५ हजार नगद सहित मेडल प्राप्त गरे ।
प्रोस्पोर्टस प्रा.लि.को आयोजनामा म्याराथन अन्तरगत भएको रोड रेशमा एपिएफका गोपी चन्द्र पार्कीले पहिलो स्थान प्राप्त गरे । उनले १ घन्टा ७ सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे । दोश्रो स्थानमा रहेका सेनाका रामजी बस्नेतले १ घन्टा २१ सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे । एपिएफकै सन्तोष बिक्रम बिष्टले १ घन्टा २२ सेकेन्डका साथ कास्य पाए । महिला तर्फ सेनाकी बिश्वरुपा बुढाले १ घन्टा १० मिनट ५७ सेकेन्डका साथ स्वर्ण पाईन् । एपिएफकी बिन्द्रा धनकेश्वरी श्रेष्ठले १ घन्टा ११ मिनट ३७ सेकेन्डका साथ रजत र एपिएफकै पुष्पा भण्डारीले १ घन्टा १२ मिनट ३५ सेकेन्डका साथ कास्य पाईन् ।
स्वर्ण, रजत र कास्य पदकधारीले नगद २० हजार, १३ हजार र ७ हजार नगद पाए । यसका साथै उनीहरुले मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
५ कि.मि. खुला दौड तर्फ पुरुमा अजित यादव र महिलाम सन्तोषी श्रेष्ठ पहिलो स्थान हात पार्न सफल भए । अजितले १८ मिनट ११ सेकेन्डमा र सन्तोषीले २० मिनट ३७ सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे । पुरुष तर्फ मिलन कार्कीले रजत र जितेन्द्र दनुवारले कास्य पाए । महिला तर्फ सानु माया कार्की र फुलमती रानाले रजत र कास्य पाए । उनीहरुले नगद १० हजार ६ हजार र ४ हजार नगद सहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
५ कि.मि.कै छात्र तर्फ १९ मिनट ५१ सेकेन्डका साथ प्रविन कुमार बोहराले स्वर्ण पाए । दोश्रो स्थानमा सागर श्रेष्ठ र तेश्रो स्थानमा नारायण तामाङ्ग रहे । छात्रा तर्फ कर्णाली स्पोर्ट्सकी मञ्जु रावतले २४ मिनट ५५ सेकेन्डका साथ स्वर्ण पाईन् । काजल बिष्टले रजत र विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक बिद्यालयकी स्वेशा बलामीले कास्य पाईन् । बिजयी खेलाडीहरुले ५ हजार, ३ हजार २ हजार नगद सहित मेडल प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
मास्टर तर्फको पुरुषमा धर्म महर्जन १९.५२.६३ समयका साथ स्वर्ण हात पार्न सफल भए । भिम बहादुर गुरुङ्गले रजत र कपिल भट्टले कास्य पाए । महिला तर्फ सरस्वती खड्का राईले २६ः५६.६२ समयका साथ स्वर्ण हात पारिन् । दोश्रो स्थानमा निलम श्रेष्ठ रहिन् । पहिलो दोश्रो र तेश्रोले १० हजार, ६ हजार र ४ हजार पाए ।
ह्विल चेयर तर्फको प्रतिस्पर्धामा कृष्ण राज चौधरी १५ः५६.४५ समयका साथ पहिलो भए । दोश्रो स्थानमा रविन्द्र खत्री र तेश्रो स्थानमा राजेश सिल्पकार रहे । महिला तर्फ यामी झाक्री मगरले बाजी मारिन् । उनले १४ ः ४७.६६ समयमा दुरी पुरा गरिन् । लक्ष्मी घिमिरेले रजत र हिरा तामाङ्गले कास्य पाईन् ।
बिजयी खेलाडीहरुले ५, ३ र २ हजार नगद सहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
‘चिल्ड्रेन पार्क’ सर्वसाधारणका लागि खुला
एन्फा अध्यक्ष विश्वकर्माको दाबीः एन्फा बाट एक रुपैयाँ पनि खाएको छैन
२७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०६:५५
काेरोना भाइरसको महामारीपछि नेपालको दशौँ राष्ट्रिय खेलकूद कर्णाली वा प्रदेश नं २ मा
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १८:३७
बढैयातालमा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट मैदान बन्ने
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०६:५०
लिवियाली सङ्कटको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने
थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीद्वारा श्रमिकलाई वैदेशिक कामका लागि मानसिकता बनाइराख्न आग्रह
नेपालमा हालसम्म दुई लाख ५७ हजार ९६२ जनाको परीक्षण
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार २०:१३
लकडाउनमा स्थानीय सरकार
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १९:२४
भरतपुर अस्पतालका दुई चिकित्सकसहित ३० जनामा कोरोना सङ्क्रमण
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १८:४४
२० आश्विन २०७५, शनिबार १४:१३